Baydhabo: Madoobe Noonow oo loo doortay Madaxweyne maamul aan aqoonsi heysan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baydhabo – Mareeg.com: Shir muddo ka socday magaalada Baydhabo, islamarkaana lagu dhisay maamul ka kooban 6-da gobol oo kala ah: Baay, Bakool, Shabeellaha Hoose, Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo Gedo ayaa maanta lagu doortay madaxweyne, iyadoo maamulkaas aysan aqoonsaneyn dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Doorashada waxaa ku tartamay 6 musharrax, waxaana wareegii koowaad ku haray 3 musharrax, waxaana isu soo haray 3 musharrax oo kala ah C/fataax Maxamed Geesey, Maxamed Aadan Fargeeto iyo Madoobe Noonow Maxamed.
Intii uusan bilaaban wareegga labaad ee cod bixinta ayaa waxaa tanaasulay C/fataax Maxamed Geesey oo horay u ahaan jiray gudoomiyaha gobolka Baay.
Wareegii u dambeeyey waxaa ku tartamay Madoobe Noonow Maxamed iyo Maxamed Aadan Fargeeto, waxaana madaxweynaha maamulkaas aysan dowladda Federaalku aqoonsaneyn ku guuleystay Madoobe Noonow Maxamed.
Waxaa wax dooranayey ilaa 73 oday oo lagu sheegay iney yihiin Golaha Odayaasha gobollada maamulka loogu dhawaaqay, waxaa Madoobe Noonow u codeeyey 44 oday, halka Maxamed Aadan Fargeeto ay codeeyeen 23 oday, waxaana xumaaday 6 cod.
Madoobe Noonow ayaa ah siyaasi horay xildhibaan iyo wasiir uga soo noqday dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta intii codeyntaasi socotay war kasoo saartay doorashada ku sheegtay iney gacan ka geysaneyso maamul loo sameeyo 3 gobol.
Qoraal kazoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ahaa sidan:
“Hadaba, Wasaaraddu waxay halkan ku caddaynaysaa moowqifka siyaasadeed ee Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ku aadan qaabka loo marayo dhismaha Maamul-Goboleed ay yeeshaan goboladaas, iyadoo la tixgelinayo waaqiciga siyaasadeed ee haatan ka jira degaanadaas.
5. Wasaaraddu waxay ugu baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed ee deegaanadaas in ay ka fogaadaan wax walba oo halin kara xasilooni daro ku timaada degaankaas”.